Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment तराईमा हुस्सु र कुहिरो, पहाडी क्षेत्रको मौसम कस्तो? - Pnpkhabar.com
तराईमा हुस्सु र कुहिरो, पहाडी क्षेत्रको मौसम कस्तो?
काठमाडौँ, ६ पुस : नेपालमा अहिले उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । तर स्थानीय वायुको प्रभावका कारण केही स्थानमा आंशिक बदलीको अवस्था भने रहेको जनाइएको छ ।
विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहे पनि तराई भूभागमा भने हुस्सु तथा कुहिरो लागेको मौसमविदले बताएका छन् । आइतबार दिनभर पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदलीको अवस्था रहने छ। बाँकी क्षेत्रको मोसम भने सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ।
यस्तै राति देशको पूर्वी तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ। बाँकी क्षेत्रमा भने मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ ।
प्रहरी देख्नासाथ १२ लाख बढी रकम छोडेर टाप !
एभरेष्ट पेट्रोल पम्पमा भीषण आ’गला’गी
कस-कसले गर्न पाउँछन् कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार?